Suuqyada Saliida ee Magaalada Muqdisho ayaa maanta laga soo sheegayaa Sara u kac Baahsan | maakhir.com
Suuqyada Saliida ee Magaalada Muqdisho ayaa maanta laga soo sheegayaa Sara u kac Baahsan
March 17, 2008 in Somalia
Mudisho:- Waxa la soo sheegayaa inay kor u kacaan Saliidaha lagu kala iib sado suuqyada waa wayn ee Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho, Goobaha inta badan lagu iibiyo Saliida ayaa maanta waxa sheegayaan inay sara u kacaday kala iibsiga Saliida,inta badan waxa aad looga soo qaylinayaan Saliida qaybteeda loo yaqaan Shidaalka ee ay is ticmaan Gaadiidku.
Gaadiidka ukala goosha qeybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa laga dareemaye gaabis iyo qiima koror la soo gudboonaaday ka gadaal markii uu saro u kacay qiimaha shidaalka suuqyada magaalada Muqdisho.
Gawaarida ayaa laga dareemayaa qiima koror ka dheeri ah qiimihii horay lagu raaci jiray gawaarida Bl-ka ah taasle ahaan gawaarida ka shaqeysa madiina iyo suuqa Bakaaraha oo lagu raacayo ku dhawaad 5-kun oo Sh Somali ah halka markii hore lagu raacijiray 3- kun oo Sh Somali ah, halkaasi ayaa waxa ka muuqta inay si xawli ah cirka isgu shareertay Saliida Ceedhiini.
Waxa jira qayla dhaan Ba”an oo ka soo yeedhaysa dareewalada Gaadiidka kuwaasi oo Gabi ahaanba ka cabanaya Sara u kacaasi soo food ee ah Shidaalka,ma jiraan Gaadiid badan oo maanta lagu dhex arki karayo Gudaha Caasimada Somaliya ee Muqdisho.
Jamaac AYaanle Feyte
Maakhir.com- Xafiisk- Bosaaso
« Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka hadlay Xaalada Amaan ee Muqdisho
Nuur Cadde ayaa ka hadlay Nabad ku soo dabaalida Dalka Somaliya ee uu xusul duubka ugu jiro »